Nezvedu - Baron (China) Co., Ltd.
Baron (China) Co., Ltd. yakavambwa pamwe nekudyara kweBaron Group International Holding Co., Ltd. Inotsigirwa nemaviri makuru epasi rose mabhenji, Besuper naBaron, ndiko kutsvagisa nekusimudzira, dhizaini, kugadzira, kutengesa, sevhisi seimwe yemabhizimusi akakosha ekupa vacheche mabhizinesi.
Kunze kwebhizimusi reOEM, gore rino kambani yedu, yakavakirwa pazera reboka reboka uye ruzivo rwekushambadzira musika, rakashama rakatangisa mhando dzinozvimiririra kupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvisingadhuri, kusanganisira Besuper Inoshamisa T Dhivhosi, Pandas Eco Dzinoraswa Manapukeni, Achangoberekwa manapukeni, nezvimwewo, izvo zvinonyanya kudiwa nevatengi.
Gadzira & Kupa ODM Zvigadzirwa
Isu tinogadzira zvigadzirwa zveODM zvezvitoro, zvitoro zvekuchengeta zvega uye mamwe mabhizinesi nekuteerera, kucherechedza nekufunga nezve zvinodiwa nevatengi. Mhando dzakasiyana dzezvigadzirwa, senge manapukeni evana, mapukuta akanyorova, manapukeni evakuru, mabhegi emarara emagetsi, evakadzi ehutsanana mapeneti uye zvimwe zvigadzirwa zvekuchengetedza kusangana nezvinodiwa nevatengi.
Premium Vakapiswa Zvigadzirwa Mumiriri
Kwemakore, kambani yedu yakashanda nesimba kumisikidza hurefu hwekudyidzana kudyidzana nemakambani ehutsanana pasirese.Ikambani yedu inomiririra huwandu hwemhando yepamusoro, kusanganisira Cuddles, Morgan House, Sarudzo yaAmai, Simba Rakachena, nezvimwe. Isu tinopa zvigadzirwa zvekuchengeta vana, zvigadzirwa zvekuchengetedza vanhu vakuru, zvigadzirwa zvekuchengetedza vanhukadzi, nezvimwewo, uye tinosangana nezvinodiwa zvemhando dzakasiyana dzevatengi.
Inobudirira Hutungamiri Chikwata
Dare rehutungamiriri hwehunyanzvi rinotungamira kambani kune yazvino bhizinesi modhi. Kufunga kwekufunga kwakatitungamira kusundira zvigadzirwa zvedu muSoutheast Asia, Africa, Australia, United States uye nepasirese.
Nyanzvi Yekutengesa Chikwata
Nemakore mazhinji ezvekushambadzira ruzivo, hupfumi hwechigadzirwa ruzivo, kushinga uye kufunga kwekufunga, timu yedu yekutengesa nevatengi vakasiyana kuti vape zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye basa repedyo kwazvo.
Nekuda kweiyo standardization yekutengesa cheni, kwepakati kutenga kwakatiunzira mukana weye mbishi yezvinhu mutengo. kudzora kwakasimba kwegadziriro yekuwedzera kwakawedzera mwero wezvigadzirwa zvakapedzwa uye kudzikisa mutengo, saka tinokwanisa kupa vatengi nemhando yepamusoro uye inodhura zvigadzirwa zvigadzirwa.
Isu tiri vatengesi vanobvumidzwa kutungamira mvumo yekushambadzira emabhizimusi, emwedzi nemwedzi kuchinjaniswa kwezvinhu zvakavandudzwa uye tekinoroji, simbisa chigadzirwa kugadzirisa iteration mune inoenderana nguva maitiro uye chigadzirwa mhando kutonga.
Mwana mucheche achangoberekwa, Vacheche Vanopukuta Kune Rinonzwisisa Ganda, Super Absorbency Yevakuru Dhivha, Yakakwira Hunhu Eco Diaper, Mucheka unoraswa, Mwana mucheche,
Mwana mucheche, Mwana mucheche achangoberekwa, Vacheche Vanopukuta Kune Rinonzwisisa Ganda, Yakakwira Hunhu Eco Diaper, Mucheka unoraswa, Super Absorbency Yevakuru Dhivha,